Tudh Qaybo-saareyaasha - Shiinaha Shirkado dayactir, Factory
Universal Joint usheeda dhexe,
Gear usheeda dhexe,
Cross-dhexaad Universal xigay
Caadiga ah Cross-dhexaad Universal xigay
-Xawaaraha sare Cold Rolling Cross-dhexaad Universal xigay
Shaqada culus Cross-dhexaad Universal xigay
Large Cross-dhexaad Universal xigay
Caadiga ah Cross-dhexaad Universal xigay:
Waxaa si weyn loo loo isticmaalo gudbinta awooda qalabka qodniinka-.
· Oolnimada gudbinta High, rabitaan weyn oo buuq orodka hooseeyo;
· Sax dheelitirka firfircoon High, ilaa G6.3 G16 ~;
· Dhismeedka wax soo saarka ayaa la filaayo in dhowr jeer, oo ay fududahay in la rakibo iyo joogteynta,
· Gacanta adag ee geedi socodka saarka alaabta si loo hubiyo tayada lagu kalsoonaan karo;
· Shirkada ayaa marti / qaybqaatay kobcinta jaangooyooyin warshadaha (2 heerarka qaranka, 4 heerka warshadaha);
· Ilaalinta Core patent (18 Been / model utility shatiyada);
· Talinayo waxyaabaha caadiga ah ee Taier si loo daboolo baahida macaamiisha;
Halbeegyada Technical Of Product:
heerkulka hawlgalka: -20 ~ + 80 ℃
kala duwan Xuddunta: 18kNm ~ 1500kNm
dhexroor Swing: 160 ~ 590mm
xagal Rakibaadda: ± 15 °
wareegga Dayactirka: jeer 360h /
-Xawaaraha sare Cold Rolling Cross-dhexaad Universal xigay:
Waxaa inta badan loo isticmaalaa in drive ugu weyn ee line qabow-giringiriyey soo saarka sheet.
· Sare-load waday awooda iyo Xuddunta gudbinta ballaadhan yahay;
·-Sax sare Labada ciyaaryahan spline kusaabsan Optional;
· Sax dheelitirka firfircoon High, ilaa G6.3;
· Oolnimada gudbinta High, ilaa 98,7% -99,9%;
· Shirkada ayaa marti / qaybqaatay kobcinta jaangooyooyin warshadaha (1 Heerka qaran, 1 heerka warshadaha);
· Ilaalinta Core patent (8 Been / model utility shatiyada);
kala duwan Xuddunta: 130kNm ~ 1150kNm
dhexroor Swing: 285 ~ 550mm
xagal Rakibaadda: ± 5 °
wareegga Dayactirka: 360h / waqtiga
Shaqada culus Cross-dhexaad Universal xigay:
Waxaa inta badan loo isticmaalaa in drive ugu weyn ee sheet kulul-giringiriyey, tuubooyin bir iyo line-soo-saarka qaybta steel dhagax diidanaa.
· Sare waday awooda inay isku soo baxaan shuruudaha gudbinta Xuddunta waaweyn iyo rabitaan ballaadhan yahay;
·-Sax sare module labada ciyaaryahan spline kusaabsan Optional;
· Shirkada ayaa marti / qaybqaatay kobcinta jaangooyooyin warshadaha (2 heerarka qaranka, 2 heerka warshadaha);
· Ilaalinta Core patent (16 Been / model utility shatiyada);
kala duwan Xuddunta: 1700kNm ~ 19405kNm
dhexroor Swing: 600 ~ 1300mm
Xagal ugu badnaan: ± 10 °
Large Cross-dhexaad Universal xigay:
Waxaa inta badan loo isticmaalaa in drive ugu weyn ee sheet kulul-giringiriyey, qaybta steel iyo line-soo-saarka iyo biibiilaha steel.
· Sare waday awooda ay u buuxiyaan shuruudaha gudbinta Xuddunta waaweyn iyo rabitaan ballaadhan yahay;
· Shirkada ayaa marti / qaybqaatay horumarinta Heerka 1 warshadaha;
· Ilaalinta Core patent (7 Been / model utility shatiyada);
kala duwan Xuddunta: 1700kNm ~ 5860kNm
dhexroor Swing: 600 ~ 900mm
xagal kubad ugu badnaan: ± 15 °
Ilkaha caleemo saaray xigay Gear
Ilkaha caadiga ah loo caleemo saaray xigay Gear
Shaqada culus Ilkaha caleemo saaray xigay Gear
Bar Oo Wire Rod Mill caleemo saaray Ilkaha xigay Gear
Shaqada culus Ilkaha caleemo saaray xigay Gear Of Hot tusmo ku dhameysashada taagan Rolling
Ilkaha caadiga ah loo caleemo saaray xigay Gear:
· Filaayo in xuduudaheedu profile ilig, iyo awoodda ay saarnaayeen waxaa kordhay 15 ~ 20% la waxyaabaha la midka ah ee suuqa la barbar dhigo;
· Taxane TG ee alaabta caadiga ah Taier ayaa caalamiyeen sare, si buuxda u dabooli dhan qaaska ah ee 11 taxane caadiga ah ee GIICL, GIICLZ, GCLD, NGCL, NGCLZ, WG, WGP, WGT, WGZ, WGC, WGJ;
· Barakac Large angular ah iyo wixii soo baxayey fallaadhihii waa la ogol yahay, ± 1.5 ° for design guud iyo ± 5 ° for design gaar ah;
· Ilaalinta Core patent (13 Been / model utility shatiyada);
kala duwan Xuddunta: 0.63kNm-1750kNm
kala duwan oo ka sooca: TG1 ~ TG38
dhexroor Swing: 103 ~ 1060mm
xagal Rakibaadda: ± 1.5 °
Shaqada culus Ilkaha caleemo saaray xigay Gear:
Waxaa inta badan loo isticmaalaa in drive ugu weyn ee wax soo saarka sheet dhagax rogid line kulul-duuban.
· Boos Dual dhinaca ilkaha iyo top iligna howlgal aad u xasiloon xigay,
· Design seal filaayo in si looga hortago khasaaro of cabbeeyo dufan, iyo gaaro muddo dheer sifaynta ka buuxa dusha ilkaha mashquuliya;
kala duwan Xuddunta: 1600kNm ~ 10750kNm
dhexroor Swing: 1080 ~ 1900mm
xagal Rakibaadda: ± 1 °
wareegga Dayactirka: 500 h / waqtiga
Bar Oo Wire Rod Mill Ilkaha caleemo saaray xigay Gear:
Waxaa inta badan loo isticmaalaa in drive weyn ee bar oo silig dhagax usha.
· Sare-sax labada ciyaaryahan spline ku habboon for macaan saraysa;
· Labada ciyaaryahan Gear boos top hawlgalka siman,
· Module wajiga-hagaajin Optional;
kala duwan Xuddunta: 31.5kNm ~ 1600kNm
dhexroor Swing: 200 ~ 760mm
Habka loo xirxiro, Vertical, Horizontal
Shaqada culus Ilkaha caleemo saaray xigay Gear Of Hot tusmo ku dhameysashada Rolling taagan:
Waxaa inta badan loo isticmaalaa in drive weyn ee line-soo-saarka sheet kulul-giringiriyey dhameysteen unit rogid.
· Wareegga qasbay technology Shiinaha ee ugu horeysay gudaha sifaynta saliid khafiif ah, hogaamiyaha warshadaha;
· Dhismaha Double-seal si loo hubiyo in nolosha adeeg dheer usheeda dhexe xigay,
· Sare-darantahay ingeega, labada ciyaaryahan marsho for load weyn siday Xuddunta;
· Shirkada ayaa marti / qaybqaatay horumarinta heerarka qaranka / warshadaha (1 Heerka qaran, 3 heerarka warshadaha);
· Ilaalinta Core patent (17 Been / model utility shatiyada);
Lub heerkulka Oil: 20 ~ 45 ℃
Lub cadaadis Oil: 1.2 ~ 1.8bar
socodka Oil Lub: 15L / min
kala duwan Xuddunta: 170kNm ~ 6000kNm
dhexroor Swing: 360 ~ 1100mm
xagal Operating: ± 1.5 °
Qaboojinta Biyaha Gudaha (nus-xiray)
Qaboojinta Biyaha Gudaha (Type furan)
Rod - Mandrel nooca waslad-Cabbeeyaha (xoojiyey)
nooca waslad-Cabbeeyaha Mandrel - Rod
Qaboojinta Biyaha Gudaha (nus-xiray):
Ku haboon gabax ka muddo dheer,
Damaanad marinka saliid cad in mandrel ku dhex qaboojinta ee usheeda dhexe ugu weyn;
Iska ilaali saameynta on nidaamka dufan mandrel uu keeno gariiradda qabtay, iwm
miisaanka gariiradda ugu badnaan: 35T
width gariiradda ugu badnaan: 1650mm
Gabax ka dhumucdiisuna waxay strip: 1.2-12.7mm
heerkulka-gabax: 100 ~ 850 ℃
Qaboojinta Biyaha Gudaha (Type furan):
Natiijada qaboojinta wanaagsan qeybta si loo horumariyo nolosha hawsheeda,
Xasiloonida mandrel u wanaagsan; muddo dheer-gabax.
Rod - Cabbeeyaha nooca waslad-Mandrel (xoojiyey):
Awoodda-gabax Sare ee mandrel ah;
Mandrel waa ku haboon xiisad weyn-gabax iyo gabax ka dhex dusin dhuumaha of X80, X100, X120
awood Motor: 1850KW
miisaanka gariiradda ugu badnaan: 41T
width gariiradda ugu badnaan: 2130mm
Gabax ka dhumucdiisuna waxay strip: 1.2-25.4mm
Rod - Cabbeeyaha nooca waslad-Mandrel:
The distributors iyo accessories biibiile waxaa laga keeno qaybaha, iyo sifaynta si fiican loo dayactiro,
miisaanka gariiradda ugu badnaan: 48.7T (Max)
width coiler ugu badnaan: 2400mm
Ahraamta darafta Mandrel
Mandrel Of Ahraam usheeda dhexe Type
Mandrel Of Nooca waslad-furan
Mandrel Of Nooca waslad-xiray
Ahraamta darafta Mandrel:
Waxaa si weyn loo isticmaalaa in decoiler ee khadadka wax soo saarka, sida fidsanaan, pickling, rogid karo iyo recoiling; waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in recoiler la xiisad yar sida mideyso line.
· Dhismeedka Simple, mar wax soo saarka hogaanka gaaban;
· Waa sahal in la guuriso oo ilaaliyaan;
faahfaahinta dhexroor dibadda ah φ468, φ508, φ610, φ762
Marinka width: 2130 (Max)
Mandrel Of Ahraam usheeda dhexe Nooca:
Waxaa si weyn loo isticmaalaa in recoiler ee line-soo-saarka qabow rogid sida dhagax wax beddelaaya iyo SENDZIMIR dhagax rogid qabow, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in decoiler ah shuruudaha xiisad sare sida line Nigeria.
· Rigidity Good, ku haboon xiisad weyn-gabax,
· Axial ama daanka Haydarooliga radial ayaa laga yaabaa in on qeybta;
Marinka width: 2600 (Max)
Mandrel Of Nooca waslad-furan:
Waxaa si weyn loo isticmaalaa in recoiler ee line-soo-saarka sida mideyso iyo recoiling iyo recoiler Carrousel.
· Xoog Good of mandrel usheeda dhexe ugu weyn;
· Waslad The axial of mandrel waxaa inta badan ka samaysan maar kabka, qaab khilaaf wanaagsan oo dusha kala saraysa;
Mandrel Of Nooca waslad-xidhay:
Waxaa si weyn loo isticmaalaa in recoiler ee khadadka wax soo saarka sida fidsanaan iyo toosinta.
No farqiga u dhexeeya qeybta ku xiga marka mandrel waa in goobo kaamil ah.
Ilo Pre-raran loo xiraa ee qeybta si loo hubiyo in aan la furmeen.
Hot Rolling xiirayo Blades
dhagaxshiidka Plate garbaha adhijirrada
Cold Rolling xiirayo Blades
Hot Rolling xiirayo Blades:
Inta badan loo isticmaalo khadadka kulul joogto rogid iyo CSP saarka
engegnaantiinna High, xooggayga iyo qalleyf heerkulka sare
xasiloonida kaamerada iyo Performance Daal kaamerada Wanaagsan
hardenability Good for darane soo noqnoqda
heerkulka hawlgalka: 800 ℃ ~ + 1150 ℃
kala duwan Size (dhererka): 650 ~ 2500mm
kala duwan engegnaantiinna aawadeed, HRC42-50
wareegga adeegga caadiga ah: 15,000times
Plate garbaha adhijirrada dhagaxshiidka,
Inta badan loo isticmaalaa in dhagax wax saxan ee 2800, 4300, iwm
xoog High, qalbi engegnaantooda aawadeed sare iyo qalleyf sare
heerkulka hawlgalka: 0 ~ 200 ℃
kala duwan engegnaantiinna aawadeed, HRC50-56
wareegga adeegga caadiga ah: xiirid qaybinaya - 15 maalmood xiirid disc waaweyn - 7 maalmood laalid xiirid - 15 maalmood
Cold Rolling xiirayo Blades:
Inta badan loo isticmaalo khadadka-soo-saarka ee rogid qabow, annealing joogto ah, pickling, mideyso, iwm ay
iska caabin ah ay xirtaan High iyo qalleyf
habboon multi-bir goynta alaabta fasalka
heerkulka ka hawlgala: Heerkulka caadiga ah
kala duwan engegnaantiinna aawadeed, HRC54-60
lacagta joogtada ah ee cut steel: 3,000 metrik -5,000
Darka Plate Miisaamidda Of Work Roll saarista Chock
Darka Plate Miisaamidda Of Back Up Roll saarista Chock
Darka Plate Miisaamidda Of Rolling Mill istaag (Carsaka guryaha)
Plate darka Miisaamidda Of Work Roll saarista Chock:
Waxaa loo xiraa on labada dhinac ee duudduuban shaqada sita chock ujeeddo ilaalinta.
· Lakabka Duugga iyo saxan salka ku xiran yihiin kiimikada iyo bond qodniinka-, xoog lagala kulmo sare;
· Qoraalkani wuxuu alxanka iyo xirtaan oo dhumucdiisuna waxay daaha loo furfurmi xulay kartaa sida ay xaalado shaqo oo kala duwan, oo dhumucdiisuna waxay daaha Duugga ah waxyaabaha dhamaystirtay waa aan ka yarayn 2mm;
engegnaantiinna dusha: HRC50 ~ 55;
heerkulka hawlgalka: 0 ~ + 350 ℃
kala duwan oo ka sooca (ugu badnaan): 1000 600mm ×
oo dhumucdiisuna waxay si joogto ah: 20 ~ 40mm
wareegga Dayactirka caadiga ah: 180 maalmood / waqtiga
nolosha adeegga caadiga ah loo isticmaalo: ≥24 bilood
Plate darka Miisaamidda Of Back Up Roll saarista Chock:
Waxaa loo xiraa on labada dhinac ee duudduuban dib sita chock ujeeddo ilaalinta.
engegnaantiinna dusha: HRC58 ~ 60;
kala duwan oo ka sooca (ugu badnaan): 1800 900mm ×
oo dhumucdiisuna waxay si joogto ah: 25 ~ 45mm
nolosha adeegga caadiga ah loo isticmaalo: ≥18 bilood
Darka Plate Miisaamidda Of Rolling Mill istaag (Carsaka guryaha):
Waxaa loo xiraa on labada dhinac ee duudduuban dib sita chock of dhagax taagan ujeeddo ilaalinta.
· Lakabka Xirashada iyo saxan salka ku xiran yihiin kiimikada iyo bond qodniinka-, xoog lagala kulmo sare;
engegnaantiinna dusha: HRC58 ~ 60
kala duwan oo ka sooca (ugu badnaan): 1900 1000mm ×
oo dhumucdiisuna waxay si joogto ah: 30 ~ 50mm